झण्डै सात खर्ब लागतका परियोजनाको ‘मास्टर डिजाइन’ गर्दै सरकारी कम्पनी
विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५२५३ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५७९९ मे.वा.घन्टा / आयात : ११७०३ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :२३२ मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२२९८७ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१३८१ मेगावाट
वि सं २०७७ माघ १२, सोमबार
भारतमा बिजुली बेच्ने बाटो बन्द, नेपालको दर महँगो हुँदा प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरण बाहिरियाे
सुनकाेसी-मरिन डाइभर्सनकाे सुरुङ खन्न २ अर्ब ४६ कराेड विनियाेजन
जलस्रोत विधेयक अन्तिम चरणमा, जलविद्युत् विकास चौथो प्राथमिकतामा
भेरी–बबईको बाँधस्थलमा धमाधम काम, बबईमा पानी खसाल्न अझै ३ वर्ष लाग्ने
६ महिनामा ऊर्जाको बजेट कार्यान्वयन प्रगति १० प्रतिशत, पुँजीगत खर्चको दर ऋणात्मक
विद्युतीय पोल सार्न मंगलबारसम्म बागेश्वरी फिडरकाे लाइन काटिने
२०७७ असोज १७
काठमाडौं । “नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । संस्थाले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न म एक्लै निस्केँ । आयोजनाको परामर्शको क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यतिखेर तीन वर्ष पूरा हुँदा केही गरियो भन्ने स्थानमा आइपुगेको छु”, हामीसँग कुरा सुरु गर्दै प्रबन्ध सञ्चालक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने ।
प्राधिकरणभित्र विशेषगरी प्राविधिक क्षेत्रमा अब्बल ठहरिएका र वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकमध्ये शीर्षस्थानमा रहेका शाक्यलाई तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै उक्त कम्पनी स्थापना गरेर जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको १७ प्रतिशत, एचआइडिसीएलको १५ र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको १७ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको छ । परामर्श एवं इन्जिनियरिङ सेवामा विदेशिने ठूलो रकम जोगाउँदै दक्ष जनशक्ति निर्माणमा कम्पनीले भूमिका खेलिरहेको छ ।
शाक्य ती दिन स्मरण गर्दै भन्छन्, “चिठ्ठीपत्र पनि आफैँ लेख्थेँ, पुर्याउन पनि म आफँै जान्थेँ, कार्यालय बनाउँदै थियौँ, दक्ष कर्मचारी पनि खोज्दै थियौँ । आज काम देखाउने ठाउँमा आइपुगेका छौँ ।”
स्वदेशी प्राविधिकले हाम्रो भूगोल सुहाउँदो डिजाइन गरौँ भन्दा नमानेर एक नर्वेजियन कम्पनीको प्रस्ताव मानेका कारण विसं २०७२ मा नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने माथिल्लो तामाकोशी कहिले सकिने हो त्यसको कुनै ठेगान छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले विसं २०७२ मा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा सङ्कटकालीन कार्ययोजनाले लिएका लक्ष्य पूरा गर्ने ध्येयका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनीको रुपमा विसं २०७३ मा उक्त कम्पनी स्थापना गर्यो ।
कूल ४०० केभी क्षमताको इनरुवा र हेटांैडा सबस्टेशनको काम चालू छ । किमाथाङ्का अरुणको सम्पूर्ण संरचना र प्रसारण लाइनको विस्तृत डिजाइनमा कम्पनीले छोटो समयमा देखाएको काम अन्य सरकारी निकायका लागि समेत अनुकरणीय छ । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी बोर्डले आयोजना अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ ।
यस्तै, २० मेगावाटको रोल्वालिङ, २५ मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सोलार परियोजना, त्रिशुली थ्री बी रातमाटे २२० केभी प्रसारण लाइन, १०० मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँ र कुशाहा–विराटनगर प्रसारण लाइनको टावर डिजाइन र त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भारमा समेत कम्पनीको भूमिका कुनै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको भन्दा कम छैन ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनका विभिन्न चरण छन् । सामान्यता पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनदेखि बोलपत्रसम्म पुग्न मात्रै चार चरण पार गर्नुपर्छ तर कम्पनीलाई शुरुमा नै विद्युत् उत्पादन कम्पनीले १८ महिनामा काम सक्नु भनेर आयोजना सुम्पियो । “कि गाली खाइएला, कि त ताली पाइएला भनेर काम शुरु गरेको छोटो समयमा नै हामीले झण्डै एक हजार मेगावाट बढी क्षमताका आयोजनाको अध्ययन पूरा गरेर बुझाएका छौँ”, प्रबन्ध सञ्चालक शाक्यले भने, “कोरोना भाइरसको जोखिम नभएको भए गत असारमा नै सबै काम सकिन्थ्यो ।”
कम्पनीले अब निर्माण प्रक्रियाको नै परामर्श दिने तयारी थालेको छ । डिजाइनलगायतका प्राविधिक काममा संलग्न कम्पनीले केही विदेशी कम्पनीको सहयोगीका रुपमा भए पनि काम गर्ने तयारी थालेको छ । प्रबन्ध सञ्चालक शाक्य भन्छन्, “तत्काल नै हामीलाई पत्याइहालेको अवस्था छैन, विस्तारै त्यो वातावरण पनि बन्दैछ ।”
अनुभव भन्ने विषय पनि कुखुरा पहिला कि अण्डा पहिला भनेजस्तो हुने उहाँको भनाइ छ । नेपाली पूँजी लगानी हुने बेतन कर्णाली, तामाकोशी पाँचौँजस्ता आयोजनामा कम्पनीले काम गर्ने भएको छ । असाध्यै कम लागतमा आयोजना अध्ययनको काम गरेको जानकारी दिँदै प्रबन्ध सञ्चालक शाक्यले भने, “नलगाडको तुलनामा हेर्ने हो भने हामीले अध्ययन गरेका आयोजनाको लागत झण्डै तीन गुणा सस्तो छ ।” कम्पनीले अध्ययन गरेर बुझाएका चार आयोजनाको कूल खर्च हालसम्म मात्रै रु ६० करोड छ । एकाध प्रतिशत पैसा मात्रै व्यक्तिगतरूपमा बोलाइएका विदेशी परामर्शदाताले लगेका छन् ।
केही समय पहिले सुनकोशी मरिन ठिक कि कमला डाइभर्सन भन्ने विवाद देखियो । सो विवाद निरुपणमा कम्पनीले नै भूमिका खेल्यो । लागत, समय र लाभका हिसाबले सुनकोशी मरिन नै ठिक भन्ने प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले समेत त्यसलाई आत्मसात् गर्यो । आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको छ । केही समयभित्रै निर्माण शुरु हुन्छ । नलगाडको प्राविधिक प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने समेत सोही कम्पनीले हेर्ने जिम्मा पायो ।
देशकै ठूलो सवस्टेशन निर्माण हुँदै थियो, ढल्केबरमा । परामर्शदाता कम्पनी काम छाडेर हिड्यो । समस्या आइप¥यो प्राधिकरणलाई । त्यसपछि कामको जिम्मा पायो कम्पनीले । कोरोनाको कहर नभएको भए केही महिना पहिल्यै सो आयोजनाको सञ्चालनमा आइसक्थ्यो । पन्ध्र दिनभित्र सबै काम सकिँदैछ ।
कम्पनीको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सवस्टेशनको काम गरेको गौरवशाली नाम समेत लेखिएको छ । नेपाल भारत विद्युत् व्यापारका लागि मात्रै नभई देशभित्रको विद्युत् वितरणका लागि समेत महत्वपूर्ण मानिएको सो सवस्टेशनको काम सकिन लागेकोमा प्रबन्ध सञ्चालक शाक्य असाध्यै खुसी देखिनुहुन्छ ।
काठमाडौँ तराई मधेश द्रुर्तमार्ग बाग्मती प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्गमा कम्पनी जोडिएको छ । कम्पनीको काम गर्ने दायरा विस्तार भएको उहाँको भनाइ छ ।
ढल्केबर, अरुण हब सवस्टेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा काम सम्पन्न भएपछि कम्पनीको हैसियतमा बृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय क्षितिज समेत उघ्रने प्रबन्ध निर्देशक शाक्यको विश्वास छ । लागतका हिसाबले भारत, पाकिस्तान, म्यानमार, भुटान अफगानिस्तानलगायतका देशमा गएर परामर्श सेवा दिन सक्ने अवस्थामा कम्पनी पुगेको छ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि झण्डै ३० खर्ब बराबरको लगानी लाग्ने अनुमान छ । लगानीसँगै ठूलो संख्यामा प्राविधिक जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्दछ । ठूला परियोजनामा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको ठूलो खडेरी छ ।
प्रबन्ध सञ्चालक शाक्यले भने, “राम्रो दक्ष कर्मचारी कि विदेश जाने, कि त उनीहरुलाई हाम्रा जस्ता संस्थाले करारमा लिनै नसक्ने अवस्था छ ।” नेपालले विकासमा फड्को मार्ने हो भने दक्ष जनशक्तिको ठूलो फौज आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
“विदेशी प्राविधिक आएपनि उनीहरुले गरेको काम सही छ वा छैन भनेर पत्ता लगाइदिने, देशको पक्षमा काम गर्ने कामदार आफैसँग हुनुपर्छ” उनले भने, “ठूला आयोजनामा समस्या देखिनुको पछाडि दक्ष जनशक्तिको अभाव हो ।”
विसं २०५४ मा चिलिमेको इलेक्ट्रोमेकानिकल डिजाइन गर्नुभएका शाक्यले जोर जबर्जस्ती नै गरेर विसं २०५२ मा कुलेखानीमा देखिएको समस्या समाधान गरेको सुनाए । “मैले अन्तर्वार्ता नै दिएर सो काम गर्न सकिन्छ भनेँ । केहीले पत्याएका थिएनन्,” उनले भने, “हामीले काम गर्यौँ, जापानी प्राविधिक आउनु परेन ।”
कुलमान घिसिङ कार्यकालमा नेपालीले अध्यारो युगबाट उन्मुक्ति पाए । घिसिङको कार्यकालमा एक ससक्त खम्बाका रूपमा काम गरेका शाक्यलाई हामीले सोध्याँै, “प्राधिकरणको अबको चुनौती के हो ?” जवाफ दिए, “भरपर्दो बिजुली ।” यस्तै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेछ । चालु आवमा झण्डै एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । सोलु, कोशी, दोर्दी र काठमाडौैं–मर्स्याङ्दी करिडोर सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
विगतमा विद्युत् नभएर विद्युत्भार कटौती गर्नुपर्दथ्यो, अब भने विद्युत् भएर पनि लाइन काटिने अवस्था आउन लागेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगदेखि स्थानीय समस्याका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई राज्यले नै विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौंमा ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने स्थानको अभाव छ । प्राधिकरणले वागमती, विष्णुमति, मनोहरा नदी किनारै किनार मोनो पोलमा १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सो लाइन निर्माण भयो भने उपत्यकाको खपत बढाएर दुई हजार मेगावाटसम्म पु¥याउन सकिन्छ । यस्तै प्रसारण लाइन भूमिगत गर्ने काम समेत शुरु भइसकेको छ । एउटै भवनमा पाँच मेगावाट विद्युत् खपत हुने अवस्था छ ।
बाहिरबाट मान्छे ल्याए मेरो दाबी रहन्छ
प्राधिकरणको शान बढाउने काममा कुलमानको सहयोगी भएर काम गरेका शाक्यलाई हामीले सौध्याँं– प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुने इच्छा छैन तपाईँको ? उनले भने, “इन्जिनियरिङका हिसाबले अहिले गरिरहेको काममा नै म सन्तुष्ट छु, तर राज्यले मेरो योग्यताको मूल्याङ्कन गरेर दिने जिम्मेवारीमा भने तयार नै छु ।”
कम्पनी स्थापना गर्दा आफ्नै रहरले आएको बताउने शाक्यलाई सधैँ आफू पन्छाइरहने त होइन भन्ने आशंका छ । “कुलमानजीलाई प्राविधिक रुपमा सहयोग गरेकै हो । उहाँसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गरेकै हो । सबै हिसाबले म सक्षम मान्छे हो । बाहिरबाट नयाँ नयाँ मान्छे ल्याउने हो वा दिने हो भने कार्यकारी निर्देशकमा मेरो पनि दाबी रहन्छ ।”
पूर्वको इलाम बजार स्थायी घर भएका शाक्यले कोलम्बो प्लानको छात्रवृत्तिमा बिई गरेका छन् भने नर्वे र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट उच्च अध्ययन गरेका छन् । उनले मुगुको गमगाड साना जलविद्युत् आयोजनादेखि, कालीगण्डकी र चिलिमे समेत बनाएको अनुभव सुनाए । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग सधँै सहकार्य गरेको र अमेरिकी सहयोग परियोजनाको काममा भने प्रतिस्पर्धा भएको सुनाए । “कुलमानजी र मैलेसंँगै प्रतिस्पर्धा गरेका थियौँ, म छानिएँ । यद्यपि, पछिल्लो चार वर्षमा हामी सबैले मिलेर प्राधिकरणलाई प्राधिकरण बनायौँ, अझै धेरै गर्न बाँकी छ”, उनले भने ।
सफलताको कथा, सुपर माई साँच्चिकै ‘सुपर’
२०७६ माघ २६
२० मेगावाटको बूढीगंगा निर्माण गर्न नसक्ने सरकार १५ हजारको ‘गफ हाँक्छ’
२०७५ साउन १३
तासको घरझैँ भत्किँदै प्राधिकरण, जोगाउने कसले ?
२०७७ ब‌ैशाख २०